War deg deg ah:Fanaan Keynaan Cabdi Warsame oo Muqdisho ka degay – SBC
War deg deg ah:Fanaan Keynaan Cabdi Warsame oo Muqdisho ka degay
Fanaanka caanka ah ee Soomaaliyed Keynaan Cabdi Warsame ayaa goor dhaweyd ka degay magaalada Muqdisho ee caasimada ah, iyadoo socdaalkan uu yahay kii ugu horeeyey ee uu ku tago magaalada uu ku dhashay mudo ka badan 20 sano, xiligaasi oo isagoo yar ay ka qaxeen dagaaladii ka dhacay Muqdisho.
Fanaanka weyn Keynaan ayaa socdaalkiisa lagu macneeyey mid ku aadan xaalada abaaraha ee ka jira dalka waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu qaybtiisa ka qaato gargaarka abaaraha ka jira wadanka, isla markaana uu doonayo in uu beesha caalamka u soo jeediyo xaaladaha abaaraha.
Fanaanka Keynaan ayaa waxaa safarkiisa ku wehliya fanaaniin u dhashay wadanka Canada isagoo sida gargaar & daawo loogu tala galay dadka abaaraha saameeyeen, waxaana booqdey Isbitaalka Banaadir oo ay ku jiraan caruur aad u fara badan oo la ildaran nafaqo daro iyo shuban biyood, iyadoo halkaas uu ka qeybinay gar gaar daawooyin iyo raashinka nafaqada.
Fanaanka caanka ah Keynaan Cabdi Warsame ayaa ummada Soomaaliyeed ku leh taariikh aad u weyn isagoo wadanka Koonfur Afrika sanadkii hore markii ay ka socdeen ciyaaraha Aduunka ka qaaday heestii Waving Flag oo uu calanka Soomaaliyeed ka babiyey kumaan kun oo qof hortooda.
Safarka Keynaan ayaa ku soo aadayaa iyadoo magaalada Muqdisho ay ku soo qulqulayaan dad aad u fara badan oo caan ah, iyadoo dhanka fanaaniinta ay ka mid aheyd heesaga caanka ah ee reer Mareykanka Mama Soul oo ka ilmaysay xaaladaha abaaraha ee ka jirta Soomaaliya.
Heesta aadka loo jecelyahay ee Waving Flag halkan hoose ka daawo link-ga Guji.
Warar dheeraad ah, sawiro & Video ku saabsan socdaalka Fanaan Keynaan booqashadiisa Muqdisho kala soco SBC insha ALAAH.